यो कस्तो नियम सरकार! बलात्कारपछि गर्भवती भएकि १३ वर्षीय बालिकालाई जिउँदै जलाउन आदेश – PathivaraOnline
Home > समाज > यो कस्तो नियम सरकार! बलात्कारपछि गर्भवती भएकि १३ वर्षीय बालिकालाई जिउँदै जलाउन आदेश
यो कस्तो नियम सरकार! बलात्कारपछि गर्भवती भएकि १३ वर्षीय बालिकालाई जिउँदै जलाउन आदेश
admin October 25, 2018 समाज	0
पछिल्लो समय बलात्कारका घटनाहरु निकै बढेका छन् । केही समयअघि मात्र कन्चनपुरमा १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको छ जसमा संलग्नलाई अझै कारवाही हुन सकेको छैन । त्यसपछि पनि देशभर बालिका बलात्कार केही घटना सार्वजनिक भइसकेको छ ।
यस्तै एक घटना भारतमा घटेको छ । तर बलात्कारबाट पीडित बनेकी बालिकालाई जिउँदै जलाउने आदेश गाउँ पञ्चायतले दिएपछि हंगामा भएको छ । भारत झारखण्डको चाइबासाको एक महापञ्चायतले बलात्कारपछि गर्भवती भएकी १३ वर्षीय पीडित बालिकामाथि पाँच लाख जरिवाना लगाएर उनलाई जिउँदै जलाउने निर्णय गरेको छ ।
मझारी प्रहरी थाना क्षेत्रमा १३ वर्षीय बालिका बलात्कार पछि गर्भवती भएपछि गाउँलेले महापञ्चायत बोलाएका थिए । महापञ्चायतले मंगलबार साँझ ५ बजे यस्तो निर्णय गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । यस क्रममा आदिवासी समाज युवा महासभाका पदाधिकारी तथा सर्वसाधारणको उपस्थिती थियो ।
पहिला महापञ्चायतले बलात्कारका आरोपी रोबिनलाई पञ्चायतमा बोलाइएको थियो । जहाँ उसले अपराध कबूल गरेका थिए । यसपछि महापञ्चायतले उनलाई र पीडितलाई पनि सजाय सुनाएका थिए । स्थानीयका अनुसार आरोपी रबिन उर्फ मानसिंह कुंकल आफ्ना ठूला भाइसँग काम गर्थे । करिब दुई वर्षदेखि रोबिन पीडिताको घरमा बस्न लागे । पीडित बालिका उनकी भतिजी समेत हुन् ।
यस बीच रोबिनले डराइधम्काइ ६ कक्षामा पढ्ने १३ वर्षकी भतिजीका साथ बलात्कार गरे त्यसक्रममा उनी गर्भवती भइन् । घटना सार्वजनिक भएपछि गाउँमा पञ्चायत बोलाइएको थियो । तर रोबिन कुंकल पञ्चायतमा उपस्थित भएनन् । फेरि मंगलबार महापञ्चायत बोलाइयो जहाँ उनी उपस्थित भए ।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार आदिवासी समाज युवा महासभाको जिल्लाध्यक्ष गब्बरसिंह हेम्ब्रमले फैसलालाई पढेर सुनाएका थिए । फैसलामा भनिएअनुसार समुदायमा कुनै पनि व्यक्ति समाज भन्दा ठूला होइनन् । यस्तो घटना फेरि नहोस् भन्नका लागि पैसा लिएर जिउँदै जलाउने पञ्चायतले निर्णय गरेको हो ।
ठुलो खुसिको खबर ,चीनबाट नेपाललाई अहिलेसम्म कै ठुलो सहयोग – हेर्नुहोस भिडियो सहित
सर्पको टाउकोमा प्रकाश देखेपछि चमत्कारी भन्दै गाउँले दंग, पूजा आराधना सुरू – पूरा हेर्नुहोस
रिना बस्नेत मृत्यु प्रकरणः अन्ततः यस्तो आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट! हेर्नुहाेस्
आज नेपालीको मन जितेका राजा स्वर्गिय राजा बिरेन्द्र शाहको जन्मजयन्ती !
रक्सीकाे बोत्तल देखिदैमा मातेर लडेर मर्‍यो भन्न मिल्छ? रिना मृत्यु प्रकरण षडराजसँग मिल्दोजुल्दो!